2017 Presidential Inauguration, 18 Gumiguru 2017
Chitatu 18 Gumiguru 2017
Ndira 21, 2017
Vamwe Varwi Vehondo VemuAmerica Vanoti Vanotsigira Mutungamiri Mutsva weAmerica VaDonald Trump
Vamwe varwi vehondo vanoti vanotsigira mutungamiri mutsva weAmerica VaDonald Trump. Mumwe murwi wehondo anoti akatyoka gumbo pahondo yeku Iraq, asi arikufadzwa nekugadzwa kwavo pachigaro sezvo aneruvimbo rwekuti vachaita basa ravo nemazvo. Ngatinzweyi hurukuro yaitwa naMarvellous Mhlanga-Nyahuye.
Vechidiki Vofadzwa Nebhizinesi Rakaunzwa Nekugadzwa KwaVaTrump MuWashington
Vamwe vakomana vechidiki vakabva kuFlorida vanoti vakafadzwa zvikuru nekufamba kwakanaka kwebhizinesi ravo rekutengesa zvinhu kuneavo vanga vashaya kuzotsigira Va Trump pakugadzwa kwavo. Vakomana vaviri ava vanoti vanotsigira vaTrump sezvo vasina huwori uye vachigona kufambisa mabhizinesi avo.
Vamwe Vanotambura MuAmerica Vanoti Kugadzwa KwavaTrump Kungango Batsira Kusimbisa Hupfumi Hwenyika
Mumwe mudzamai anotambura anoti kunyangwe zvake asina kuwana mukana wekuenda kwange kuchigadzwa VaDonald Trump semutungamiri weAmerica, anetarisiro yekuti hupfumi hwenyika yake husimbe. Mudzimai uyu audza Marvellous Nyahuye kuti shuwiro yake ndeyekuti VaTrump vawanise vanhu pekugara pakanaka.
Vanga Vari Mutungamiri weAmerica, VaBarack Obama, Vanopedza Basa Vachitaura Mashoko Ane Tarisiro
Vanga vari mutungamiri weAmerica, VaBarack Obama, vatenda vatsigiri vavo neChishanu vasati vaenda kuzororo ravo kuCalifornia. VaObama vataura mashoko aya vaine mudzimai wavo, Michelle, pamuzinda wemauto weJoint Base Andrews in Maryland. (APTN)
VaObama naVaTrump Vari Pamwechete kuMuzinda weWhite House Pamberi Pekutoreswa Mhiko kwaVaTrump
VaObama Vanotambira VaTrump kuMuzinda weWhite House
Mumwe Mutsigiri waVaTrump Otaura Pamusoro peKugadzwa Kwavo
Mumwe mutsigiri waVa Donald Trump wechidzamai anoti achange ari kumabiko emusi weChishanu asi achaenda zvakare kunobatana nemamwe madzimai achange achiratidzira nemugovera. Anoti anoda kunyatsonzwisisa zvichemo zvemadzimai kuitira kuti bato rake rigadzirise pasina kumira zvakanaka.
Vanhu Vobva Kunzvimbo Dzakawanda Vachitsigira VaTrump
Zvimwe zvizvarwa zveAmerica zvinoti zviri muWashington kuzotsigira VaDonald Trump avo vachange vachigadzwa semutungamiri mutsva weAmerica neChishanu. Amai Amy Bazoro vaudza Marvellous Mhlanga Nyahuye weStudio7 kuti vari kufara nekugadzwa kwaVa Trump.